२ श्रीमानलाइ फिल्मी सैलीमा एक युवतीले ठगिन, ७ महिना संगै बसी सम्पति लिएर फेरी पुर्ब श्रीमान संग फरार (भिडियो सहित) – Online Nepalaja
२ श्रीमानलाइ फिल्मी सैलीमा एक युवतीले ठगिन, ७ महिना संगै बसी सम्पति लिएर फेरी पुर्ब श्रीमान संग फरार (भिडियो सहित)
February 12, 2021 80
झापा। बैदेशिक रोजगारीको क्रममा कमाएको सम्पत्ति कुम्लाएर पूर्व श्रीमानसँग भागेपछि पाँचथरको मिक्लाजुङ–१ का हिमाल राई न्यायको खोजीमा भौतारिएका छन् ।दुबईमा रहँदा सामाजिक सञ्जामा चिनजान भएर विवाह गरेका हिमाल यतिबेला न्याय खोजिरहेका हुन् । श्रीमान भूपाल राईसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेको र दुई छोरी रहेको बुद्धिमायाले बताएकी थिइन् ।
लेटाङ नगरपालिका–१ की बुद्धिमायासँग हिमालको सम्पर्क टुटेको छ । ‘दुई छोरीको आमा हुँदा पनि मैले उसको पीडा सुनेर विहे गरे’ उनले भाबुक हुँदै भने–‘अहिले मलाई रुवाएर गई ।’ श्रीमति बुद्धिमायालाई नगद र सुन फिर्ता गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिँदा पनि चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । यसैसाता श्रीमति बुद्धिमायासँग सम्पर्क गर्दा उल्टै धम्की दिएको उनले बताए ।हिमालकी दिदी निता राईले भाई सोझो भएकाले विदेशमा दुख गरेर कमाएको रकम लिएर बुहारी फरार भएको बताइन् ।
Prevम:म: मन पराएर खानेहरुका लागी आयो दु खको खबर
Nextखुशीको खबर : बजारमा आएको एक पटक खाए महिनाभर पुग्ने गर्भनिरोधक चक्की !
श्रीमनलाई समेत थाहा नहुने महिलाका ७ रहस्य, एकचोटी पढ्ने कि ?
..त्यसपछि उनले ज्यान लिए !
यसकारण आफ्नै भाउजुले नन्दको श्रीमानसङ्ग बिहे गरिन, नन्द कै अगाडी भाउजुले खुलाइन खास कुरा (भिडियो)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (393)